Kutaura naCraig Russell. Kubva mumabhuku ake, kuverenga uye zvinyorwa zvinyorwa. | Zvazvino Zvinyorwa
Kutaura naCraig Russell. Kubva mumabhuku ake, kuverenga uye zvinyorwa zvinyorwa.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Mabhuku, Nhema nhema
Craig Russell mabhuku. Mufananidzo wepashure: Jonathan Russell.
Kuenderera mberi ne sounding kune vanyori kuti vatitaurire kuverenga kwavo, nhasi tine Craig russell. Iye akabudirira weScotland mhosva yekunyora akapindura zvakanaka Chishanu chapfuura kumibvunzo yangu kuburikidza neTwitter kutanga uyezve, zvakanyanya kuwanda, kuburikidza neFacebook.
Russell ndiye muumbi Del inoshanda curator Jan Fabel, wemapurisa eHamburg. Zvakare izvo zvinosetsa uye zvine hukasha mutikitivha lenox kubva kune grey Glasgow yema50. Russell ndeimwe yeiyo vakatevera uye vanozivikanwa vanyori vevatema mhando. Haisi nguva yekutanga kupindura vaverengi vako seni Saka tinoongorora basa rake, kuverenga kwako Mumaoko uye isu tinoongorora imwe yemahara mamiriro. Kubva pano zvangu kune hukama hwako.
Craig Russell akaberekerwa mu 1956 mudunhu re Fife, Scotland. Parizvino anorarama, zvinoenderana nemashoko ake, "Mumoyo waBruce neWallace nyika uye ndinonzwa kukomborerwa nazvo". Izvi ndizvo zvaakapindura paakaratidza kuyemura kwangu Scotland uye nhoroondo nhoroondo yaMambo Robert I The Bruce (ona Braveheart). Iye zvakare munyori we nyaya pfupi.
Sezvatinotaura, zvisikwa zvake zvine mukurumbira Ivo ndivo mutungamiriri weGerman-Scottish Jan Fabel, ane nhevedzano ye Mabhuku manomwe gara mukati Hamburg rakashandurwa kupinda kupfuura Mitauro 20. Kubatanidza akateedzana, iyo ye Lennox, aimbova musoja weCanada akashandura mutikitivha wepachivande, uyo waakachinjira kuchimiro chakasiyana zvachose cheGlasgow yemakumi mashanu.
Nyora zvakare mamwe marudzi emanyowani (Zvebhaibheri) ine pseudonym ye Christopher galt.
1 Jan Fabel Nyaya
3 Zvawako kuverenga
4 Pane imwe nzvimbo yekutsikisa
Jan Fabel Nyaya
Yakakomba kwazvo, yakatwasuka uye inoshanda Jan Fabel akarwisa madutu ese evaurayi, akanangana nema psychopath uye kushungurudzika kwakamupoteredza. Kusagadzikana kwake, huchenjeri uye hunyanzvi hutungamiriri hunyanzvi uye timu yakanaka kwazvo pasi pekuraira kwake vakamuwanisa kuyemurwa kwemamiriyoni evaverengi. Uye makesi avo anowanzove neakakura Nhoroondo kumashure nevamwe vatambi vengano.
Nhoroondo dzake dzakashandurwa kuita iyo terevhizheni neGerman ARD ine hukuru vateereri kubudirira.
Rufu muHamburg (Ropa Gondo, 2005)
Nyaya yekufa (Mukoma vakasuwa, 2006)
Resurrección (Asingagumi, 2007)
Ishe weCarnival (Mudzidzisi weCarnival, 2008)
Kutsiva kweValkyrie (Rwiyo rweValkyrie, 2009)
Kutya kwemvura yakasviba (Kutya Kwemvura Yakasviba, 2011)
Midzimu yeAltona, 2015 - Kwete kuburitswa muSpain
Lennox, kusiyana naFabel, hapana kana chakamira kana chechokwadi. Zvinoshamisa kupfuura kungofungira ichi chakaoma (kana chisina kuomarara zvakadaro) aimbove wemauto canadian inofamba sehove iri mumvura kuburikidza neashure-kwehondo Glasgow inotonhora sekusviba. Rarama zuva nezuva uye gadzirisa zvakafanana neshamwari dzemapurisa senge nemabhanditi akakosha kwazvo muguta. Nyaya dzavo dzinewo yakarongwa kugadziriswa neBBC.
Iko kutsvoda kweGlasgow (Iyo Yakareba Glasgow Kutsvoda, 2010)
Kurara kwakadzika rima (Iyo Yakadzika Rima Kurara, 2011)
Vakafa Varume uye Vakaputsika Mwoyo, 2012 - Kwete kuburitswa muSpain
Zvandinotaura uye ndoshandura:
Parizvino, ndiri kuverenga High Sierra rakanyorwa naWR Burnett. Ini ndaida iyo yemuvhi vhezheni yacho (naHumphrey Bogart) pandakanga ndiri mudiki asi ndangotarisana nekuverenga bhuku racho. Izvo zvinoshamisa kuti zviripo panguva iyi muchitaera. Ndiri kuverenga zvekare kopi yepamberi ye kukanganwa, by Michael Ridpath -Ndiyo inonakidza zvinoshamisa yekutanga kuScotland. Ridpath munyori wandinoyemura uye kukanganwa anofanira kunge ari kugona kwake zvakadaro. Mudzimai wangu achangonditengera bhuku renhau pfupi nemunyori weAmerica George Saunders, saka zvichava zvinotevera!
Iye zvino ndiri kuverenga Yakakwirira Sierra, rakanyorwa naWR Burnett. Ini ndaida iyo bhaisikopo vhezheni (naHumphrey Bogart) pandakanga ndiri mudiki asi ndichiwana nguva yekuverenga bhuku. Izvo zvinoshamisa zviripo panguva yazvo maitiro. Ndiri kuverenga zvakare kopi yekutarisa kwe kukanganwanaMichael Ridpath, inonakidza zvisingaite yekutanga kuScotland. Ridpath munyori wandinoyemura uye kukanganwa anovimbisa kuve rake rakanakisa basa. Mudzimai wangu akangonditengera bhuku renhau pfupi dzekuAmerica George Saunders, saka izvo zvichave zvinotevera.
Pane imwe nzvimbo yekutsikisa
Kuongorora zvakare kana aigona kuziva chimwe chinhu nezve nei, ndakataura kunyunyuta kwangu pamusoro pekukanganisa kuburitswa kwemabhuku ake achangoburwa Kuno kuSpain.
Akapindura kudaro Spain yakagara iri musika wakakosha kwaari uye akada zviito zvese zvaakauya kuzoita. Zvakaratidzawo bvuma kuti ibasa kuti pakave nekukanganiswa kuya. Akataura nezve zvikonzero zvematambudziko ehupfumi iyo yakapihwa nemuparidzi kubva pano. Uye akanyunyuta nekuti anga ari munyori akavimbika kwavari.
Akawedzera kuti yake vamiririri vari kutsvaga muparidzi mutsvaasi vanoziva kuti chii Zvakaoma izvo shambadza dzakateedzana dzakatoburitswa nemumwe. Yakazviratidza kunyanya kushungurudzika pane kugumbuka nekuti enganonyorwa dzichangoburwa vese Fabel naLennox ave akabudirira kwazvo. Asi zvaivewo kutarisira kuwana muparidzi mutsva uye kuti tinogona kuva navo pano, kuitira "Mumwe wevateereri vanofarira".
Zvisinei, iyi yanga iri nguva yekunyora yemwedzi kwandiri. Ndiri fan hombe yaRussel uye zvakare ndinoda kumutenda nekugona kwake uye netsiye nyoro.. Izvi hazviwanzo kuitika nevanyori vekunze kana venyika. Asi zvirokwazvo Russell anoyemurwa. Uye kune avo vasati vaziva Fabel kana Lennox, verengai IZVOZVI.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kutaura naCraig Russell. Kubva mumabhuku ake, kuverenga uye zvinyorwa zvinyorwa.
Mhoroi, ndinokutendai nekutizivisa, ndakaverenga ese Lennox ari muchiSpanish, ini ndakamirira vekupedzisira "Vakafa Varume uye Vakaputsika Mwoyo" muchiSpanish, hongu ... ini ndaisaziva dambudziko nderekuti rinowana muparidzi, ndinovimba ichagadziriswa munguva pfupi.
Vanyori vashanu kuti vaende kune zvinyorwa zvemuAfrica